सरकारले एकजना विद्यार्थीका लागि डेढ करोड खर्च गरेर स्कुल खोल्दै ,यस्तो छ कारण – Medianp
सरकारले एकजना विद्यार्थीका लागि डेढ करोड खर्च गरेर स्कुल खोल्दै ,यस्तो छ कारण
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन ३०, २०७५१२:३२0
काठमाडौ । अहिलेको सुचना र प्रविधिको युगमा शिक्षा एकदमै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । किनभने पहिलेको जमानामा कम मानिसहरु पढेलेखेका हुन्थे । तर अहिले धेरै पढे लेखेका भिडमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । त्यसैले सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा निकै चासो देखाउने गर्दछ । आज हामी त्यसैमध्येको एक अचम्मको शिक्षाको बारेमा कुरा गदै छौ । जहाँ सरकारले एकजना विद्यार्थीका लागि डेढ करोड खर्च गरेर स्कुल खोलेको छ ।
यो शिक्षा अन्तै कतैको नभएर अमेरिकाको हो । व्योमिंगस्थित लारामी सहरमा सरकारले एकजना विद्यार्थीका लागि डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरेर स्कुल खोल्ने तयारी गरेको छ । यो दोस्रो पटक खोलिएको स्कुल हो । यस भन्दा पहिले सन् २००४ मा पनि यस ठाउमा केवल एकजना बच्चाको लागि स्कूल खोलिएको थियो । सो स्कुलमा पढेका ती विद्यार्थीका अनुसार त्यो स्कुल शिक्षक र विद्यार्थी दुबैका लागि निकै अनौठो भएको जनाइन्छ ।
किन सरकारले खोल्यो एकजना विद्यार्थीको लागी करोडौ खर्च गरेर स्कुल ?
अमेरिकाको यो क्षेत्रको धेरैजसो भाग पहाडी इलाका भएकाले व्योमिंगको कानूनका अनुसार सहरी क्षेत्रबाट टाढा बस्ने बालबालिकाहरुलाई धेरै टाढाको स्कुलमा भर्ना गर्न नसक्ने यसको मुख्य कारण हो । किनभने पहाडी क्षेत्रमा सडकको अवस्था नाजुक भएकाले विद्यार्थीहरुलाई टाढाको स्कुलमा लैजान गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारले त्यहाँ भिडियो कन्फ्रेन्सिङ्गका माध्यमबाट समेत पढाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
शंकास्पद वस्तु निस्क्रिय
बाटोमा भेटिएका यी चीज झुक्किएर पनि नछुनुहोस् ! अपवित्र हुन्छ !
बुद्धिमानी भनिएका व्यक्तिमा हुन्छ यस्तो नराम्रो बानी ! हेर्नुस् त कतै तपाईमा पनि छ की ?
बिहानै यी काम गरेर सुरु गर्नुहोस् दिनको सुरुवात ! सोचेभन्दा फरक पाउनुहुनेछ !
३५० वर्ष अघिको एउटा पेन्टिङ, जसमा लुकेको थियो हत्या-षड्यन्त्रको कथा